Waxaa jiray dood iyo isdhaafsi loogu talagalay Shantou Vocational College with Multifit bishan November 29-keedii, 2021. Si diiran ugu soo dhawoow macalimiinta iyo wakiilada ardayda kuliyada farsamada gacanta ee Shantou inay soo booqdaan shirkadeena. Iyadoo uu hagayo kormeeraha maamulka...
Is-abuurnimada iyo is-isticmaalka ma aha oo kaliya inay si buuxda u isticmaalaan saqafka shaqo la'aanta ah ee shirkadda, laakiin sidoo kale waxay noqotaa doorashada koowaad ee ganacsiyada si ay u kordhiyaan dakhliga iyo dhimista kharashaadka. Marka loo eego sifooyinka saqafka ayaa loo qaybiyay mashruuca tamarta sawir-qaadista oo lagu daray ...
Muhiimadda nadiifinta iyo dayactirka moduleka PV Qaybaha sawir-qaadista ayaa aad u nugul heerkulka. Boodhka noocan oo kale ah ayaa ku urursan dusha moduleka, taas oo kordhisa kala-wareejinta kulaylka iyo caabbinta kulaylka ee modules-ka sawir-qaadista oo noqda lakabka kuleylka kuleylka, resul ...
Waa maalin cadceed ah, ma bixino kharashka korontada, nidaamkuna wuxuu dhaliyaa koronto meelo kala duwan maalin kasta. Kani waa mashruuca nidaamka sawir-qaadista, kaas oo iga dhigaya inaan taahayo. Xoog u huray cirka buluuga ah ee t...
Dhanka waqooyi oo dhan, Xiddigta Waqooyi ayaa horay ii hagta. Shaqada ka dib, waxaan u muuqdaa inaan ahay meel dhoobo ah, ma soo qaadi karo. Haha, waxaan arkaa inaan mashquul ku ahaa maalintii oo dhan, ma aha naftayda oo keliya, laakiin sidoo kale saaxiibadayda ku jira aqoon-is-weydaarsiga. Anaga, si aan macaamiisheena ugu barakeyno sanadka cusub, a...
Si loo shaaciyo aqoonta badbaadada xoojinta wacyiga badbaadada kor u qaadista dhaqanka badbaadada abuur jawi badbaado si ficil ahaan loo xoojiyo dacaayadeynta iyo waxbarashada wax-soo-saarka badbaadada shirkadeena kor u qaad horumarinta dhaqanka badbaadada Agaasimaha Liu ayaa inta badan sharaxay aragtida ...
Kulanka guddiga dhexe ee maaliyadda iyo dhaqaalaha, kaarboonka ugu sarreeya iyo ka-hortagga kaarboonka ayaa lagu dari doonaa kormeerka iyo qiimeynta
Kadib markii ay labada kalfadhi soo dhamaadeen ayaa waxaa shirkii sagaalaad ee golaha dhexe ee golaha dhexe ee maaliyadda iyo dhaqaalaha waxa ay ka sheegeen mawqifkooda ku aaddan kaarboonka iyo ka takhalusidda kaarboonka, waxayna tilmaameen dariiqa loo marayo hirgelinta. Waxay tusinaysaa muhiimada aan la bedeli karin ee kaarboonka sareynta iyo dhexdhexaadnimada kaarboon...
Zhongneng "photovoltaic + baabuur daadin"
Iyada oo la isticmaalayo goobta aan shaqayn ee barkinta baabuurta la dhigto si loo dhiso goob baabuurta la dhigto oo sawir qaade ah, korontada laga dhaliyo waxaa laga iibin karaa gobolka marka laga soo tago bixinta baabuurta, taas oo aan kaliya helin dakhli aad u wanaagsan, laakiin sidoo kale hoos u dhigaya cadaadiska korontada ee magaalada. Photovoltaic waxay daadisay badbaadinta tamarta isku mar,...